zifudumele okugeza ophahleni - iphuzu eliyinhloko ekwakhiweni yayo. Le ngxenye isakhiwo kumele bahlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
ukuvikelwa umswakama kanye okushisa aphakeme;
ukwahlukanisa izakhiwo ezinhle, ngaphandle ukulahlekelwa ukushisa eziyigugu;
namandla okuma umthwalo isisindo;
Condensate ekwaziyo amathonsi abandayo bewa ophahleni.
Indlela yokufeza ukugcwaliseka kwalezi zimo? Ukwakhiwa kanye ukwahlukanisa of ophahleni okugeza engenziwa ngezindlela ezihlukahlukene. Okokuqala udinga sithole choice of impahla ukwenziwa kwemisebenzi. Ungakwazi ngokushesha ukuqeda fiberboard ethandwa, ipulangwe futhi plastic. Amabili ezibonakalayo zize kuqala is zikhubazekile uma kumanzi, futhi uma obudaywe noma proolifit - ihlaba umkhosi intuthu amagesi anobuthi avela ukushisa. I epulasitiki ngenkuthalo aqoqana condensate.
kudivayisi ophahleni okugeza
Inguqulo ngaphandle elisophahleni
Futhi log, futhi iphaneli Uphahla lwangaphakathi zokugeza has sakhiwo lesifanako. Umehluko nje kukhona ukuthi umusi esakhelwe esikhundleni ophahleni isikhumba yangaphandle. Tinsita futhi okugeza ophahleni ukwahlukanisa kuhlanganisa izinto ezilandelayo:
I okufana nge Loft
Kulesi samuntu idivayisi ngenye indlela. Ngenhla amabhodi ophahleni isicelo enamathela ngobumba, ukushuba zazo kuhluka isigamu ngamasentimitha amabili. Kwembulunga of ophahleni in the okugeza kwenzeka ngokusebenzisa ngokugcwalisa chips izinkuni eyayihunyushwe ngaphambilini ofakwe usimende nosimende. Lesi sendlalelo ukwahlukanisa kufanele abe ukushuba kusukela nanhlanu nesikhombisa cm. Kungenzeka ukusebenzisa ezinye izinto ngenjongo efanayo, into esemqoka ukukhumbula ukuthi enganele ukwahlukanisa ungqimba kuzoholela ukufingqa ophahleni. Uma lokhu kwenzeka, udinga ukwengeza inani Ukuvikelwa ezishisayo.
Kufutfumeta ophahleni okugeza indlela lasendulo
Ceiling amabhodi zathathwa kusukela ngekwata ezomile futhi nolimi, ogama ukujiya mkhulu kunezinhliziyo 4 ngamasentimitha. Phakathi inhlangano is ngenakugwemeka ukuvela izimbotshana. Bona ezigcotshwe ngemva Ukuvalwa emphemeni kusukela elisophahleni ngaphandle kwalokho ngobumba ofakwe isihlabathi. Ukuvumelana ingxube kufanele zifane amafutha ukhilimu omuncu.
Lapho ubumba elomile Slots, lapho isetshenziswa bonke ubuso ngokuphelele, kodwa kulokhu kakade exutshwe isihlabathi olinganise efanayo ngoba kubekwa esithandweni. I ukujiya ungqimba ingxube ezinhlanu noma eziyisithupha cm uma seyomile bese wathela phezu isihlabathi esomile, ukuphakama indunduma -. Cm eziyishumi.
It ngci ipayipi bushing nazo zonke izinkambiso ukuphepha umlilo. Ibanga phakathi flue esidayisa nophahla amabhodi asikwazi ukuba ngaphansi kuka-25 amasentimitha, tube eziseduze izakhi ukhuni ivikelwe asbestos ishidi.
Umgomo we operation yophahla olungaphakathi kanje: okugeza egcwele umusi, ubumba ubamba futhi cwilisa, ngaleyo ndlela ngeke sivumele amanzi uphenduke. Lapho egcinwe lomisile okugeza sishisa futhi somile futhi ubumba okwesikhathi ebambe ukushisa isikhathi eside.
ukwahlukanisa Modern for the okugeza
Ngezinye izikhathi zokugeza abakhi ngci ophahleni ngesisekelo sauna yabo. Ngenxa yalokho, lo mbhangqwana engayekanga umusi. Inkinga nje emoyeni, kodwa futhi ngendlela kulo eyenziwa ukwahlukanisa of ophahleni.
Classic Russian okugeza lwamakholi gumbi kumele babe kudivayisi elandelayo ophahleni. Isendlalelo phansi kuthiwa ukugawulwa block, ukushuba ubuncane 6 cm Basuke wabeka umusi isithiyo :. amakhadibhodi abajonqile ofakwe uwoyela linseed, aluminium ucwecwe noma wax ephepheni. Ngaphezu kwakho koke embozwe oluthambile. Ngemuva omiswe, kubalulekile ukuba uqhubekele ukwahlukanisa.
Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe ukwahlukanisa ingaba njengesihluthulelo sawdust, ofakwe isixazululo ubumba, umhlaba, isihlabathi, ubumba zandiswa amaminerali uvolo. Clay ku impregnation akusho ahlukanise amagundane, lokhu inzuzo yayo. ukunakekelwa ngokukhethekile kuyadingeka ukuze vimbela ophahleni eduze amapayipi.
Ngemva kwalokho, yenza screed usimende-isihlabathi, noma walala amabhodi.
Winterizing olungaphambili lwesonto amaminerali uvolo: ubuchwepheshe, ukufakwa, ukwahlukanisa
Indlela vimbela amafasitela lokhuni ebusika ngezandla zakho: ubuchwepheshe kanye isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo